हामी एफएफएफवर्ल्ड फिलामेन्ट्स विश्लेषण गर्दछौं: लचिलो, PETG, ABS, धातु र PLA | नि: शुल्क हार्डवेयर
आज हामी तपाईलाई एउटा विस्तृत ल्याउँछौं समीक्षा को एक मिश्रित विविधता बाट FFFWORLD कम्पनीबाट filaments। यस अलाभका निर्माताले २०० materials देखि विभिन्न सामग्री र प्राविधिक सुविधाहरूको फिलामेन्ट निर्माण र विकास गर्दै छ जुन बजारमा बढ्दो चर्को भइरहेको छ।
यस अवसरमा प्रयास गराैँ FFFworld फिलामेन्ट्स: लचिलो, PETG, ABS, धातु र PLA। तिनीहरू सबै धेरै फरक फिलामेन्टहरू हुन् जसले हाम्रो क्षमतालाई प्रिन्टरको साथ परीक्षणमा ल्याउँदछ सबै भन्दा राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्नका लागि।
हालसालै त्यसको फाइदा उठाउँदै हामी लेगियो डी लियोन थ्रीडी प्रिन्टरको विश्लेषण गर्दछौं, हामीले यो समीक्षाको लागि त्यो उपकरण प्रयोग गर्यौं। तातो ओछ्यान र "allinmetal" extruder सम्मिलित गरेर, यो कुनै पनि filament को साथ समस्याबाट बच्न आदर्श विकल्प हो। प्रिन्टि software सफ्टवेयरको रूपमा हामीले रिपीटर होस्ट प्रयोग गरेका छौं।
La निर्माताको वेबसाइट छ सफा र सहज डिजाइन र यसको माध्यमबाट नेभिगेट गर्न सजिलो छ एक विशिष्ट फिलामेन्ट पाउन। प्रत्येक सामग्रीको लागि उही पृष्ठमा, निर्माताले प्रभाव प्रतिरोध वा अधिकतम स्ट्रेच जस्ता टेक्निकल सुविधाहरूको विवरण दिन्छ।
थप रूपमा, निर्मातासँग यसको ग्राहकहरूको लागि उपलब्ध गराउने उत्कृष्ट विचार छ तपाइँको वेबसाइट को समर्पित अनुभाग को प्रोफाइलहरू प्रिन्ट गर्नुहोस् CURA, SLIC3R र यसको सबै फिलामेन्टको SIMPLIFY3D, साथैaप्राविधिक पाना.
केहि सामग्रीहरु को एक विस्तृत छ मुद्रण गाइड जसमा तिनीहरू दस्तावेज छन् अन्य चीजहरूको बीचमा सामान्य समस्याहरू जस्तै warping वा क्र्याकिंग र तिनीहरू फरक छन् प्रिन्टिंग सुझावहरू। निर्मातालाई पहिलो टाइमरहरूको लागि निर्माता संसारमा अवस्थित कठिनाइहरू लिनको लागि अर्को सकारात्मक बिन्दु।
1 FFFworld फिलामेन्टहरू अनप्याकिंग गर्दै: लचिलो, PETG, ABS, धातु र PLA
1.1 ABSTECH फिलामेन्ट
1.2 FILAMETAL फिलामेन्ट
1.3 प्लैच फिलामेन्ट
1.4 FLEXISMART फिलामेन्ट
1.5 PETGTECH फिलामेन्ट
2 FFFworld फिलामेन्टमा अन्तिम निष्कर्ष: लचिलो, PETG, ABS, धातु र PLA
FFFworld फिलामेन्टहरू अनप्याकिंग गर्दै: लचिलो, PETG, ABS, धातु र PLA
निर्माताले यसको ग्राहकहरु लाई वितरण गर्न मा विशेष ध्यान दिन्छ। सबै कुण्डल तिनीहरू आफैं भित्र पसे वैक्यूम प्याक अर्को सिलिका desiccant sachet र पनि एक जिप ब्याग फिलामेन्ट भण्डार गर्न इष्टतम अवस्थाहरूमा जबकि प्रयोगमा नभएकोले यसले ओस शोषण गर्दैन। कुण्डलीहरू भित्र भित्र पुर्‍याइन्छ बाक्लो गत्ता बक्स यसले यातायातको बखतमा प्राप्त गर्ने कुनै पनि प्रभावलाई यो अवशोषित गर्दछ।
आपूर्ति गरीएको ABSTECH Filament सेतो रंगमा छ र प्रिन्टिंग भर एक सजातीय टोन र चमक कायम गर्दछ। मलाई थाहा छ २ perfectly० डिग्री सेल्सियसमा ठ्याक्कै प्रिन्ट गर्दछ, निर्माण दायरा भित्र दायरा भित्र तापमान। यसको प्रयोगको क्रममा हामीले यो याद गर्‍यौं कुनै अप्रिय गन्ध छैन, जुन अन्य निर्माताहरूबाट ABS सँग हुन्छ। हामीले बनाएका कुनै पनि प्रिन्टमा टुक्राहरू टुक्राएर छुट्टिएर युद्ध गरिरहेको समस्याको कारणले गर्दा हो कि हामीले मात्र राखेका छौं। bed० डिग्री सेल्सियस मा तातो ओछ्यान यसको सट्टामा निर्माता द्वारा सिफारिस गरिएको १००।
निस्सन्देह यो फिलामेन्ट हो जसले हामीलाई परीक्षणको क्रममा सब भन्दा युद्ध दिन्छ। छ PLA भन्दा नरम स्थिरता र यसले extruder तान्नु गाह्रो हुन सक्छ। पनि छ धेरै पग्लन र नोजलमा फस्न सजिलो कम तापमान प्रयोगको बावजुद, वरपर १०º से। सबै चीजको बाबजुद पनि हामी समर्थन स्ट्रक्चर बिना नै फोटोमा देखाइएका टुक्राहरू छाप्न सक्षम भएका छौं। यो फिलामेन्टको साथ केही समय लड्न लायक छ, जब हामी अन्तमा प्रिन्ट गर्न सक्दछौं हामी अचम्मित हुनेछौं आश्चर्यजनक प्रतिबिम्बहरु कि मा प्राप्त छन् छापिएको भागहरू केवल एक संग धातु कणको १०% शुल्क.
पीएलए एक फिलामेन्ट हो जसको साथ हामी सबै छाप्न सहज महसुस गर्दछौं, यो लगभग कहिल्यै युद्धको समस्याबाट ग्रस्त हुँदैन, यो सामान्यतया एक्सट्रुडरमा भरिपूर्ण हुँदैन। यसैले हामी यो प्रिन्ट गरेर परीक्षणमा राख्न चाहन्छौं ठूलो सपाट सतहहरू र वस्तुहरू ए द्वारा छापिएको धेरै उच्च रिजोलुसन (Mic० माइक्रोन) जे भए पनि फिलामेन्टले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। हामीले उत्कृष्ट प्राप्त गर्न तातो पलंग प्रयोग गर्नु आवश्यक पर्दैन प्रिन्टहरू बेसमा राम्रोसँग चिप्लिए र तहहरु संग राम्रो संगै जोडिए। पठाइएको नमूना एक रंग हो हरियो "खट्टा स्याउ", एक टोनलिटी जुन हामीले वास्तवमै मनपराउँथ्यौं।
यस निर्माताको लचिलो फिलामेन्ट विशेष गरी चाखलाग्दो छ। राख्छ अन्य लचिलो फिलामेन्टको समान लोच का मापदण्डहरू बजार मा तर धेरै छ यससँग प्रिन्ट गर्न सजिलो। वातावरण को एक सिफारिश उपयोग तापमान संग १०º सेहामीसँग फिलामेन्ट छ कि प्रिन्टिंगको आधारमा मात्र पर्याप्त बल प्रयोग गर्दछ ताकि प्रिन्टिंगको क्रममा छुट्टिनु हुँदैन, तर यो समाप्त भएपछि प्रिन्टरबाट वस्तु हटाउन सजिलो हुन्छ। फिलामेन्ट पनि छ केहि कडा हामीले प्रयोग गरेका अन्य लचिलो फिलामेन्टहरू भन्दा यो सानो विस्तारको साथ मुद्रण सजिलो बनाउँछ जससँग निर्माताले बिभिन्न निर्माणको एक्स्ट्राउडरहरूको संख्या बढाउनको लागि प्रबन्ध गर्दछ जुन यसमा आवश्यक कर्षण प्रदर्शन गर्न सक्षम हुनेछ यसको झुम्का वा जाम बिना प्रयोग गर्न।
यद्यपि हामीले प्राप्त गरेको परीक्षण सामग्रीले धेरै सानो केन्द्रीय प्वालको साथ कुण्डलहरू प्रयोग गर्दछ, हामीले निर्माताको वेबसाइटमा प्रमाणित गर्‍यौं कि सामग्री हाल नै थप मानक आयामका साथ कुण्डलहरू प्रयोग गरी पठाइएको छ।
यो फिलामेन्ट्स मध्ये एक हो जुन प्राय: प्रिन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। यो सामग्री एक निर्माता को दुःस्वप्न हो जब सम्म तिनीहरूले यसको ह्या of्ग पाउँदैनन्, यो धेरै प्रवाहित हुने झुकाव हो, चिसो हुन धेरै समय लाग्छ, आवश्यकताहरू धेरै उच्च तापमान प्रिन्टिंग (हाम्रो मामलामा º० डिग्री सेल्सियस), समग्रमा यो मुद्रित वस्तुको राम्रो भागको लागि बलमा समाप्त हुन को लागी सजिलो छ र जब यो सर्दै छ भने एक्सट्रुडरमा चिप्लन्छ। FFFworld filamentaको साथ हामीसँग उत्कृष्ट गुणको देखिन्छ तीव्र रातो रंग .
FFFworld फिलामेन्टमा अन्तिम निष्कर्ष: लचिलो, PETG, ABS, धातु र PLA
प्रत्येक विश्लेषणित फिलामेन्ट्सले हाम्रा अपेक्षाहरू भन्दा बढी भेट्टाए। र सबै मद्दतको साथ निर्माताले हाम्रो हावामा राख्छ, हामीसँग हाम्रा केही अंशहरू हुनेछन् र हामी सबैलाई थाहा हुन्छ उनीहरूलाई कसरी समाधान गर्ने।
जब म प्याकेज खोल्छु र तपाईंलाई भेट्छु सबै कुरा पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ र जेली बीन्सको एक सानो झोला पनि तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ FFFWORLD सबै विवरणहरूको ख्याल राख्न ठूलो ध्यान दिन्छ। तिनीहरूको उत्पादनहरू प्रयोग गर्दा तपाईंसँग सँधै त्यस्तो महसुस हुन्छ। बाट एक zip- लक बैग को समावेश सामग्रीहरु को भण्डार गर्न को लागी सामग्री कुण्डल y स्ट्यान्डमा घुमाउँदा कुनै अवशेष छोड्दैन.
धेरै महत्त्वपूर्ण विवरण यो छ कि कत्तिको ज्वाला कपालमा कत्तिको चोटले आएको छ, यसले सौंदर्यप्रणाली मात्र सम्पन्न गर्दैन, तर सुनिश्चित पनि गर्दछ समुद्रीत बिना लगातार सामग्रीको अनरोलिंग यसले हाम्रो प्रभावमा सम्झौता गर्न सक्छ।
निर्मातासँग राम्रोसँग भण्डार गरिएको क्याटलग छ हामी फिलामेन्ट मिस गर्छौं जुन काठ र अन्य विदेशी फिलामेन्टहरूको नक्कल गर्दछ जुन हामी अन्य ब्रान्डमा फेला पार्न सक्छौं। हामी आशावादी छौं कि निर्माताले बिस्तारै यसको सूची विस्तार गर्दछ ताकि यसले बिल्कुलै सबै ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ।
के तपाईलाई यो विश्लेषण मनपर्‍यो? के तपाइँ कुनै थप प्रमाण याद गर्नुहुन्छ? के तपाईं बजारमा विभिन्न फाइलेमेन्टहरूको विश्लेषण जारी राख्न चाहनुहुन्छ? केहि विशेष ब्रान्ड? तपाइँले हामीलाई लेखमा छोड्नुभएको टिप्पणीहरूमा हामी सतर्क हुनेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » 3D मुद्रण » हामी एफएफएफवर्ल्ड फिलामेन्ट्स विश्लेषण गर्दछौं: लचिलो, PETG, ABS, धातु र PLA
अलेफ वस्तुहरू थ्रीडी प्रिन्टरहरूको लागि पहिलो पूर्ण नि: शुल्क फिलामेन्ट सिर्जना गर्दछ
ओबी जुआन O'Really खुला स्रोत पुरस्कार जीत